Soo dejiso Convair Moodel 7002 XF-92A FSX & P3D - Rikoooo
Tani waa diyaaraddii ugu horreysay oo garabka Mareykanka ee delta, oo sameysa duullimaadkeedii ugu horreeyay Abriil 1948, Convair XF-92 oo loo maleynayo inuu noqdo diyaarad dagaal ayaa weli ah mashruuc tijaabo ah, casriyeynta 3D ee tan add-on waa tayo aad u wanaagsan, goos goosku waa mid qurux badan oo leh cabbirro macquul ah iyo 3D-guji-dhawaaqyo codadkuna waa kaamil yihiin. Saamaynta "gubashada ka dib" sidoo kale waa mid aad u qurux badan. Waxay ka kooban tahay afar qoraal oo qoraal ah. Iswaafajin Prepar3D v4 +
MUHIIM: XMLTools waa in la dhejiyaa si loo helo saamaynta "G" iyo "AoA" inay shaqeeyaan.
XMLTools loogu talagalay FSX/P3D ma aha v4:
XMLTools loogu talagalay P3Dv4:
Shirkadda XF-92 waxay ahayd diyaaradaha ugu horreeya ee duulimaadka Maraykanka. Asal ahaan asal ahaan ahaaneed oo ujeedkoodu yahay difaaca maxalliga ah, qaabaynta ayaa dib loo dhigay si tijaabo ah oo tijaabo ah. Si kastaba ha ahaatee, nashqadeeda si habboon loo shaqeynayo waxay horseedi jirtay Shirku in uu isticmaalo garabka boodhka ee dhowr nooc, oo ay ku jiraan Delta Dagger F-102, Delta Dart F-106, B-58 Hustler, F2Y Sea Dart of Navy, sidoo kale sida XFY tijaabo ah. (Wikipedia)
Author: Milton Shupe, Rick Mackintosh, Brian Alexson, Scott Thomas, Hans-Joerg Naegele, Jan Rosenberg, Nigel Richards, Pilot Sawirka Jan Visser, iyo Tire textures by Mike Kelly